Mar 23, 2020 |0comment
ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ မတ် ၂၃ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌...
Mar 10, 2020 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်သည် MyJustice မှ Team Leader ဖြစ်သူ Mr. Ross Clarke အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၀ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး သည် MyJustice မှ Team Leader ဖြစ်သူ Mr. Ross Clarke နှင့်...
Mar 05, 2020 |0comment
ဥပဒေအရာရှိ အဆင့်(၄) အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
နေပြည်တော်၊ မတ် ၅ ရက်
Feb 27, 2020 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Ms. Tone Tinnes အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Ms. Tone Tinnes အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင်...
Feb 25, 2020 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်သည် International Committee of the Red Cross (ICRC) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Stephan Sakalian အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး သည် International Committee of the Red Cross(ICRC)၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr....
ပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပရေး အပတ်စဉ်အမှိုက်ကောက်ခြင်း တက်ရောက်
ဘားအံ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက် (၂၉.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)အချိန် ဘားအံ-ဇာသပြင်အဖြောင့်လမ်း၌ ပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပရေး အပတ်စဉ်အမှိုက်ကောက်ခြင်းတွင် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးစောချစ်မြင့်လေးနှင့် တကွ ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်/မြို့နယ်မှ ဥပဒေအရာရှိများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါကြောင်း...
ဘားအံ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် (၂၈.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)အချိန် ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ ကရင်ပြည်နယ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ ကရင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးစောချစ်မြင့်လေးနှင့် ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးညီညီလွင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ...
ဘားအံ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် (၂၀.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၁:၀၀)အချိန် ဘားအံမြို့၊ အမှတ်(၃)အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်း၊ ပညာရတနာခန်းမ၌ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားတွင် ဘားအံခရိုင်ဥပဒေရုံး၊...
ဘားအံ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက် (၁၉.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၉:၀၀)အချိန် Hotel Thanlwin Paradise ၌ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဖမ်းဆီးရမိသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင် ဥပဒေရုံး၊...
Total Visits: 336,876